Otu esi agbanwu onye njikwa Xbox 360 wired
site na nchịkwa na 21-10-22
1. Tụgharịa onye njikwa ka azụ na -eche gị ihu. (2)/, N'ime onye njikwa na etiti aka nri ala, ị ga -ahụ obere akwụkwọ mmado nwere koodu mkpọchi. Aha a dị n'akụkụ hologram Microsoft/Xbox 360. Wepu akara a ma tinye ya na oghere ịgha ahụ ghere oghe. 2. Tọgharia ihe nkedo na azụ ...
Onye njikwa egwuregwu mkpanaka ọ bara uru ịzụta?
site na nchịkwa na 21-10-16
Ọ bara uru ịzụta? Ọ dabere na egwuregwu ị na -egwu yana ihe kpatara ị jiri kwuo ya n'ihi nsogbu mmegharị ahụ. Imirikiti egwuregwu mkpanaka n'ahịa enweghị ihe nkwụnye ala maka ịrụ ọrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị nwere ike ọ gaghị enwe ike iji ya gwuo egwuregwu ịchọrọ igwu mgbe ịzụrụ onye njikwa wee b ...
Ọkwa ọhụrụ nke mmepe egwuregwu: oge ​​opupu ihe ubi nke ụlọ ọrụ egwuregwu bọọlụ China
Dabere na data na -akwadoghị, mbupu onye njikwa egwuregwu China ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke ngụkọta nke ụwa, mana ụzọ nnwere onwe nnwere onwe site n'aka ndị na -emepụta egwuregwu egwuregwu China adịchaghị mma. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na -emepụta ihe maka ndị na -egwu egwuregwu emeela ka uru ụlọ ọrụ belata. Dị ka akara egwuregwu ...
Jikọta XBOX One onye njikwa na njikwa
Ọ ga -ewe gị obere oge ijikọ onye njikwa na onye ọbịa gị. Ị nwere ike iji usoro atọ ndị a iji rụọ ọrụ. Jikọọ site na aka 1. Gbanyụọ onye ọbịa XBOX ONE 2. Tinye batrị AA abụọ na aka 3. Pịa ma jide bọtịnụ XBOX ruo mgbe agbanyere onye njikwa gị, bọtịnụ XBOX ga -...
Otu esi edobe onye njikwa egwuregwu Win7
site na nchịkwa na 21-09-03
Taa, aga m ewetara gị otu esi edobe onye njikwa egwuregwu Win7 yana otu esi eme ntọala njikwa egwuregwu Win7, ka ị nwee ike idozi nsogbu ahụ ngwa ngwa. Iji kpọọ ụfọdụ egwuregwu na sistemụ Win7, ịkwesịrị ịwụnye ihe njikwa ma ọ bụ onye njikwa ka ọ kpọọ. Ekwesịrị ịhazi ụfọdụ aka tupu igwu egwu, mana ...
Otu esi ahazi ihe njikwa egwuregwu kọmputa
Usoro ịrụ ọrụ 1. Buru ụzọ jikọọ aka egwuregwu na kọmpụta site na eriri USB. 2. Mgbe ahụ kọmpụta ahụ ga -agwa gị ka ejikọ ngwaọrụ USB ọhụrụ. Pịa menu “Malite” wee họrọ “Ngwaọrụ na ndị na -ebi akwụkwọ”. 3. Na mpio mepere emepe, ị ga -ahụ ihe niile d ...
Etu ịtọlite ​​bọọlụ egwuregwu na win7
Gaa n'ihu dị ka ndị a: 1. Etu ị ga -esi ahụ bọọdụ egwuregwu: 1） Mgbe ikwunyechara ọdụ USB nke egwuregwu bọọlụ ahụ na kọmpụta, kọmputa ahụ ga -agwa gị ka ejikọ ngwaọrụ USB ọhụrụ. Mgbe ngwa ngwa kwụsịrị, anyị pịa na menu [Malite] wee họrọ [Ngwaọrụ na ndị na -ebi akwụkwọ]. 2, Mgbe imepere [Ngwaọrụ na Bipute ...
Xbox 360 na -ejikwa njikwa anwansi anwansi wee ghọọ oke Windows
N'etiti consoles egwuregwu, ngwa usoro Microsoft Xbox kacha mma maka nkwado Windows. Sistemụ arụmọrụ kachasị ugbu a Windows 10 nwere ike ịdepụta ọdịnaya nke onye ọbịa na kọmpụta, onye njikwa Xbox One nwekwara ike jikọọ na Windows n'enweghị nsogbu. Ọ bụghị naanị nke ahụ, site n'enyemaka nke ...
Otu esi eji ihe njikwa egwuregwu mkpanaka Otu esi ahazi ihe njikwa egwuregwu mkpanaka
Nke mbụ, anyị kwesịrị ịghọta aka. Aka ahụ bụ mmepụta otu egwuregwu. A na -ejikwa bọtịnụ na ihe ọ joụ joụ na aka ahụ na -achịkwa mmegharị na omume nke ihe odide egwuregwu. Enwere ike kewaa aka n'ọtụtụ ụdị, dịka ọmụmaatụ, enwere ekwentị mkpanaka, consoles egwuregwu, ...
Kedu ihe bụ isi ihe dị na bọọlụ egwuregwu ahụ?
Igodo akụ obe D-Pad nwere ike bụrụ ihe ama ama Nintendo kacha ewu ewu na paịpụ egwuregwu. Enwere ike ịhụ ịdị adị nke igodo obe n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ bọọlụ egwuregwu ọ bụla taa. Mkpanaka Analog Na June 1996, Nintendo, nke mepụtara igodo obe na igodo L/R, gbakwunyere echiche ọzọ na njikwa: ...
Egwuregwu bọọlụ nwere ụdị njikọ ikuku dị iche iche
Mana maka ejiri aka emebere maka egwuregwu mkpanaka, enwere ụfọdụ ọdịiche na ụzọ njikọ. Yabụ ka anyị lebakwuo anya na ụzọ njikọ ndị njikwa ikuku ikuku na -eji. 1. Teknụzụ Bluetooth Bluetooth bụ nke telivishọn Erics mepụtara ...
Akụkọ ihe mere eme nke ndị na -ahụ maka egwuregwu
Akụkọ ntolite Ebe egwuregwu kọmputa na-ada nwayọọ nwayọọ na mbido 1990, ọnọdụ afọ iri abụwo ọkụ. Ndị na -anụ ọkụ n'obi na PC nwere ezigbo ohere ị toa ntị na mpaghara a juputara na ohere azụmaahịa na ogologo oge. Ndị ọrụ PC okenye nwere akụkọ ihe mere eme nke ihe karịrị afọ iri prob ...
Okwu:Ụlọ 2214, Fenlin International Building Longgang Okporo ụzọ, Longgang, Shenzhen, China
<img elu = "1" obosara = "1" style = "ngosi: ọ dịghị;" alt = "" src = "https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3009188&fmt=gif"/>